वाम गठबन्धनले निर्वाचन जिते देशमा अधिनायकवाद आउँछ ? – Etajakhabar
वाम गठबन्धनले निर्वाचन जिते देशमा अधिनायकवाद आउँछ ?
इलाम: पूर्वप्रधानमन्त्री तथा इलाम क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार झलनाथ खनालले वाम गठबन्धनले निर्वाचन जिते देशमा अधिनायकवाद आउँछ भनेर गलत प्रचार गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । इलामको गोर्खेमा आज वाम गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब वाम गठबन्धनले चुनावमा दुईतिहाई मत ल्याउँछ, त्यही भएर विपक्षीहरूको निन्द्रा हराएको छ ।” प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टका विरूद्ध झुट बोलेर जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको आरोप समेत खनालले लगाउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १३, २०७४ समय: २१:०१:२२